နည်းနည်းတော့ ခါးမယ်နော်။ အမှန်တရားမို့လို့ပါ... - Barnyar Barnyar
နည်းနည်းတော့ ခါးမယ်နော်။ အမှန်တရားမို့လို့ပါ…
March 10, 2022 ချစ်ရေးချစ်ရာ 0
တရားဝင် လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ Living together နေတဲ့ မိန်းခလေးတွေဟာ တကယ်တော့ အခမဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေပါ။ သူတို့တွေဟာ ပိုက်ဆံ ပေးစရာမလိုပဲ အခမဲ့ အလကား ရတဲ့အမျိုးပေါ့။
သူတို့အတွက်လိုတာက ဟန်ဆောင်မှုတွေပါတဲ့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးတခွန်းပါပဲ။ ဒီဘက်ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပျိုစင်ဘဝကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ မိန်းခလေးတွေ တနေ့တခြား တိုးပွားလာတာက ဝမ်းနည်းစရာပါ။
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတခွန်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးကြီးလွန်းတဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် မဟုတ်သေးတဲ့ တစိမ်း ယောကျာ်းတယောက်ကို အလဟတ်သတ် လွယ်လွယ်နဲ့ အလကား ပေးလိုက်ရတာ
တွေးတတ်ရင် တကယ်တော့ ရင်နာစရာပါ။
ကိုယ်က ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ Living together နေလိုက်လို့ သူ့က ကိုယ့်ကိုယူမှာ သေခြာရဲ့လား? သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကရော မပြတ်ကြတော့ဘူးလား? သူ နဲ့ ကိုယ် ဖူးစာအကြောင်းမပါလို့ လမ်းခွဲရရင် နစ်နာရမဲ့သူက မိန်းခလေးပဲလေ။
နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ မသန့်ရှင်းတော့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးကို နောက်တယောက်နဲ့ ဘယ်လိုစခန်းသွားကြမလဲ? နောက်တယောက်ကို ကိုယ့်ရဲ့ အပျိုစင် မဟုတ်တော့တဲ့ ဘဝအကြောင်းကို ဘယ်လိုပြောပြမလဲ?
ဒီလို ကိစ္စမျိုး ဆိုတာကလည်း ဒီခေတ်ကြီးမှာ လိမ်ထားလို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ ကိုယ်နဲ့တကယ် လက်ထပ်ရတဲ့ ကိုယ့်ခင်ပွန်းက သိပြီး သူ့ဘက်က ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်ကွာလို့ ပြောပါစေအုံးတော့ နောင်တချိန်ချိန်မှာ သူက ကိုယ့်ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကို မရလိုက်လေချင်းလို့ တွေးတွေးပြီး ရင်နာနေမှာအမှန်ပဲလေ။
ဒီကမှ ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေ ဖေါ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေရာက ကွဲကြကွာကြ နဲ့ နောက်ဆုံး ပျက်စီးခြင်း ပဲ အဖတ်တင်မှာပါ။ တကယ်တော့ living together ဆိုတာ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ မအပ်စပ်သလို ဘာသာရေးအရ ကြည့်ရင်လည်း အင်မတန် ရွံစရာကောင်းတဲ့ ပြစ်မှုတခုပါ။
ဒီတော့ ယောင်းမတို့ရေ ညည်းတို့ရဲ့ အပျိုစင်ဘဝဟာ ရည်းစားအတွက် မဟုတ်ပဲ အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါစေ နော။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ပိုက်ဆံပေးပြီး ဆက်ဆံခံရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာကမှ အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိမဲ့ အဖြစ်မျိုး ဖြစ်နေအုံးမယ်နော။
အခမဲ့ပြည့်တန်ဆာဖြစ်ဖို့ ၃ စက္ကန့် လောက် အချိန်လေးပဲ ကြာပေမဲ့ အပျိုစင်ပြန်ဖြစ်ဖို့တော့ ရှိသမျှစည်းစိမ်ပုံပေးတောင် ဒီတသက် ဘယ်တော့မှ ပြန်မရတော့ဘူးနော်။
နညျးနညျးတော့ ခါးမယျနျော။ အမှနျတရားမို့လို့ပါ…
တရားဝငျ လကျမထပျရသေးပဲနဲ့ Living together နတေဲ့ မိနျးခလေးတှဟော တကယျတော့ အခမဲ့ ပွညျ့တနျဆာတှပေါ။ သူတို့တှဟော ပိုကျဆံ ပေးစရာမလိုပဲ အခမဲ့ အလကား ရတဲ့အမြိုးပေါ့။
သူတို့အတှကျလိုတာက ဟနျဆောငျမှုတှပေါတဲ့ ခဈြတယျ ဆိုတဲ့ စကားလေးတခှနျးပါပဲ။ ဒီဘကျခတျေ မွနျမာနိုငျငံမှာ အပြိုစငျဘဝကို တနျဖိုးမထားတဲ့ မိနျးခလေးတှေ တနတေ့ခွား တိုးပှားလာတာက ဝမျးနညျးစရာပါ။
ခဈြတယျဆိုတဲ့ စကားလေးတခှနျးနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ တနျဖိုးကွီးလှနျးတဲ့ အပြိုစငျဘဝကို ကိုယျ့အိမျထောငျဖကျ မဟုတျသေးတဲ့ တစိမျး ယောကျြားတယောကျကို အလဟတျသတျ လှယျလှယျနဲ့ အလကား ပေးလိုကျရတာ
တှေးတတျရငျ တကယျတော့ ရငျနာစရာပါ။
ကိုယျက ကိုယျ့ခဈြသူကောငျလေးနဲ့ Living together နလေိုကျလို့ သူ့က ကိုယျ့ကိုယူမှာ သခွောရဲ့လား? သူနဲ့ ကိုယျနဲ့ကရော မပွတျကွတော့ဘူးလား? သူ နဲ့ ကိုယျ ဖူးစာအကွောငျးမပါလို့ လမျးခှဲရရငျ နဈနာရမဲ့သူက မိနျးခလေးပဲလေ။
နောကျပွီး ကိုယျ့ရဲ့ မသနျ့ရှငျးတော့တဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကွီးကို နောကျတယောကျနဲ့ ဘယျလိုစခနျးသှားကွမလဲ? နောကျတယောကျကို ကိုယျ့ရဲ့ အပြိုစငျ မဟုတျတော့တဲ့ ဘဝအကွောငျးကို ဘယျလိုပွောပွမလဲ?
ဒီလို ကိစ်စမြိုး ဆိုတာကလညျး ဒီခတျေကွီးမှာ လိမျထားလို့ရတဲ့ အရာမဟုတျတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ ကိုယျနဲ့တကယျ လကျထပျရတဲ့ ကိုယျ့ခငျပှနျးက သိပွီး သူ့ဘကျက ခှငျ့လှတျနိုငျပါတယျကှာလို့ ပွောပါစအေုံးတော့ နောငျတခြိနျခြိနျမှာ သူက ကိုယျ့ရဲ့အပြိုစငျဘဝကို မရလိုကျလခေငျြးလို့ တှေးတှေးပွီး ရငျနာနမှောအမှနျပဲလေ။
ဒီကမှ ငယျကြိုးငယျနာတှေ ဖျေါပွီး အိမျထောငျရေး အဆငျမပွရောက ကှဲကွကှာကွ နဲ့ နောကျဆုံး ပကျြစီးခွငျး ပဲ အဖတျတငျမှာပါ။ တကယျတော့ living together ဆိုတာ ယဉျကြေးတဲ့ လူ့အသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ မအပျစပျသလို ဘာသာရေးအရ ကွညျ့ရငျလညျး အငျမတနျ ရှံစရာကောငျးတဲ့ ပွဈမှုတခုပါ။
ဒီတော့ ယောငျးမတို့ရေ ညညျးတို့ရဲ့ အပြိုစငျဘဝဟာ ရညျးစားအတှကျ မဟုတျပဲ အိမျထောငျဖကျအတှကျပဲ ဖွဈပါစေ နော။ ဒီလိုမှမဟုတျရငျ ပိုကျဆံပေးပွီး ဆကျဆံခံရတဲ့ ပွညျ့တနျဆာကမှ အခမဲ့ပွညျ့တနျဆာထကျ ပိုပွီးတနျဖိုးရှိမဲ့ အဖွဈမြိုး ဖွဈနအေုံးမယျနော။
အခမဲ့ပွညျ့တနျဆာဖွဈဖို့ ၃ စက်ကနျ့ လောကျ အခြိနျလေးပဲ ကွာပမေဲ့ အပြိုစငျပွနျဖွဈဖို့တော့ ရှိသမြှစညျးစိမျပုံပေးတောငျ ဒီတသကျ ဘယျတော့မှ ပွနျမရတော့ဘူးနျော။